12 Talaabo oo loogu talagalay Guusha Suuqgeynta Warbaahinta Bulshada | Martech Zone
Sabti, Sebtember 13, 2014 Axad, Sebtembar 14, 2014 Douglas Karr
Dadka ku jira BIGEYE, oo ah hay'ad adeeg abuur leh, ayaa leh isku soo wada duubo sawirkan si looga caawiyo shirkadaha soo saarista istiraatiijiyad suuq geynta warbaahinta bulshada guul. Runtii waan jeclahay jabinta tillaabooyinka laakiin sidoo kale waxaan ka damqanayaa in shirkado badan aysan haysan dhammaan ilaha ay ku daboolaan baahiyaha istiraatiijiyad bulsho oo weyn. Soo noqoshada dhismaha dhagaystayaasha bulshada iyo wadista natiijooyinka ganacsi ee la qiyaasi karo inta badan waxay qaadataa in ka badan dulqaadka hoggaamiyeyaasha shirkadda dhexdeeda.
Research oo ogow dhagaystayaashaada, aqoonsashada mawduucyada iyo xiisaha ay ugu badan yihiin bulshada.
Kaliya dooro si looga faa'iideysto shabakadaha iyo aaladaha sifiican ula hadla dhagaystayaashaada.
Sheeg adiga tilmaamayaasha waxtarka muhiimka ah (KPIs). Maxaad dooneysaa in dadaalkaaga bulshada uu gaaro? Guusha maxay u egtahay marka la eego qiyaas ahaan?
Qor buugaagta suuq geynta warbaahinta bulshada. Buug-yaraha ciyaarta waa inuu si faahfaahsan u qeexaa waxyaabaha aad ka kooban tahay KPI-yada, astaamaha dhagaystayaasha, noocyada shakhsiyadeed, fikradaha ololaha, munaasabadaha dhiirrigelinta, tartamada, mawduucyada mawduucyada, tallaabooyinka maaraynta dhibaatooyinka, iwm.
Diyaarso xubnaha shirkaddaada ee ku xeeran qorshaha. U xilsaar mas'uuliyadaha cidda soo diri doonta, yaa jawaabaya, iyo sida loo soo sheegayo cabirrada.
Qaado 30-60 daqiiqo bilowga toddobaad kasta ama bil kasta si aad u jadwal u dhigto farriimaha tweets, Facebook posts, LinkedIn posts, biinanka, ama waxyaabaha kale ee warbaahinta bulshada. Kuwani waxay noqon karaan fikrado asal ah, xiriiriyeyaal shaqadaada ah, ama xiriiriyeyaal ku saabsan waxyaabaha ka baxsan ee laga yaabo inay faa'iido u leeyihiin ama ay xiiseynayaan dhagaystayaashaada.
Abuur bangiga waxyaabaha ku jira oo isticmaalaya xaashiyaha macluumaadka isla markaana qorsheeya mawduucyada mawduucyada, cinwaanada, xiriiriyeyaasha la xiriira, jadwalka la doonayo, magaca qorayaasha, iyo aag lagu oggolaado maamul khad kasta.
Post waxyaabaha ku habboon ee la xiriira mowduucyada wararka iyo dhacdooyinka waqtiga ku habboon. Waa muhiim inaad la wadaagto ra'yiga sida ugu dhakhsaha badan markay wararka cusubi u dhacaan.
Daawee dhammaantood khadadka bulshada si gooni gooni ah. Waa inaadan dhajin fariin isku mid ah kanaallada oo dhan - xusuusnow cidda dhagaystayaashu ka dambeeyaan madal kasta.
Qof u xilsaar inaad u dhaqanto sidii wakiilka adeegga macaamiisha si uu uga jawaabo waxyaabaha isticmaalaha abuuray iyo diidmada. Ha iska indha tirin faallooyinka iyo jawaab celinta!
Jadwalka warbixinta! Waxay kuxirantahay yoolalkaaga, cabbiraadda cabirku waxay dhici kartaa toddobaadle, bille, ama bille.
Dib u eegis qorshahaaga joogtada ah. Haddii wax qorshahaaga ka mid ahi aanu shaqeynin, u beddel ama maadada A / B ee tijaabada ah si loo ogaado waxa dhagaystayaashaadu uga jawaabayaan si ka wanaagsan.
Tags: profiles dhagaystayaashabigeyepersonas sumadfikradaha ololahabangiga waxyaabaha ku jiramawduucyada mawduucamawduucyada mawduucatartankatallaabooyinka maaraynta dhibaatooyinkaAdeegga macaamiishacinwaanadatilmaamayaasha waxtarka muhiimka ahkpisxafladaha xayeysiintaxiriiriyeyaasha la xiriirajadwalkawaddooyinka bulshadaadeegga macaamiisha bulshadaisku waafajinta warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshadabangiga waxyaabaha ku jira warbaahinta bulshadaadeegga macaamiisha warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada KPIsshabakadaha warbaahinta bulshadabuugga ciyaaraha bulshadaboostada warbaahinta bulshadatabinta warbaahinta bulshadacilmi baarista warbaahinta bulshadajadwalka warbaahinta bulshadatallaabooyinka warbaahinta bulshadaistiraatiijiyadda warbaahinta bulshadatalaabooyinka